HTMLDOC: gbanwee HTML ka ọ bụrụ PDF na GNU / Linux | Site na Linux
HTMLDOC: tọghata HTML na PDF na GNU / Linux gị
Enwere ike ịgbanwe usoro HTML ka ọ bụrụ ederede PDF ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Can nwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche. Otu n'ime ha na-etinye na nkesa GNU / Linux gị HTMLDOC ngwa. Ọ bụ ngwa nwere GUI dị mfe, agbanyeghị na ị nwekwara ike iji ya site na usoro iwu. Ọ bụ ikpo okwu na oghere mepere emepe, ị nwekwara ike ịhụ nkọwa ndị ọzọ na ya gọọmentị webụsaịtị. Iji budata tarball na koodu isi ị nwere ike ikpokọta, ị nwere ike ịga gị GitHub saịtị.
Nwekwara ya dị n'ọtụtụ ebe nchekwa nke distros kachasị ewu ewu, yabụ ị nwere ike iji nchịkọta ngwugwu maka ntinye dị mfe site na ọnụọgụ abụọ. Ozugbo arụnyere, ị nwere ike ịmalite iji ya. Cheta na obughi web na ihe ntughari PDF, ma a Akwụkwọ HTML na PDF. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ntụgharị, ọ ga-adị mfe dị ka ịgba ọsọ iwu ndị a:
Ọ bụrụ na ị na-eme ya site na GUI, ọ dị mfe nghọta na nghọta karịa. Ihe ọzọ bụ na ịchọrọ gbanwee web peeji ka PDF. Iji maa atụ, chee na ị gara na blọọgụ a ma amasịkwa ụfọdụ isiokwu ya. Wantchọrọ idebe ya na mpaghara gị na PDF iji lelee ya na ntanetị ma ọ bụrụ na ịnweghị njikọ oge niile ma ọ bụ na ịchọrọ ịdebe otu ma ọ bụrụ na ehichapụ ya na blọọgụ. Maka nke ahụ, e nwere ngwaọrụ ndị ọzọ dị mma dị n'ịntanetị dị ka nke a:
Naanị detuo URL nke ederede ma ọ bụ ibe nke masịrị gị, kpoo ya na igbe ahụ wee pịa bọtịnụ iji mepụta PDF ị nwere ike ibudata n'efu na enweghị ndebanye aha. Nanị njedebe bụ ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ na ị nwere ike ịgbanwe n'otu ọnwa ... Na mgbakwunye na ngwá ọrụ ahụ, enwere nhọrọ ndị ọzọ iji mee nke a ka m na-ekwu, mana nke a bụ ọkacha mmasị m maka ịdị mfe na ịdị irè ya. Agbanyeghị na m ga-ekwu, na ụfọdụ ibe weebụ enweghị ike ịgbanwe ha, mana ha bụ ndị pere mpe ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » HTMLDOC: tọghata HTML na PDF na GNU / Linux gị
Emeelarị Ubuntu Touch OTA-10
Google Chrome OS 76: na-akwado nkwado ọtụtụ akaụntụ maka Chromebooks